Indlu yasehlotyeni kufuphi neZegrze Reservoir
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPaweł
Indlu ecocekileyo, enezitena kwindawo enkulu kunye nenokuthula kufuphi nehlathi. Indawo ebanzi ejonge emazantsi, indawo yokosa inyama. Igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo evulekileyo, iTV yasemhlabeni, iWi-Fi, inkqubo yesandi yeBluetooth. Ikhitshi elixhotyiswe, phakathi kwabanye umatshini wokuhlamba, ikofu.
Phezulu, igumbi lokulala elipholileyo elahlulwe lazizowuni ezimbini. Phezulu, 1 ibhedi ephindwe kabini kunye ne-2 single. Phantsi, kukho indawo yokulala yabantu ababini. Licebo lokuzonwabisa labucala elinophawu lwalo. Ngaphambi kokuba ubhukishe, buza malunga nomhla
Ubumelwane obuzolileyo, umoya opholileyo kunye neentaka ziyacula.
Indawo efanelekileyo yokuphumla kwentsapho okanye indibaniselwano yomsebenzi weofisi yasekhaya ngombono wehlathi. Izilwanyana zasekhaya zamkelekile.
Kude nesiphithiphithi sesixeko, kwaye usekufutshane naso. Imizuzu engama-30. ukusuka eWarsaw kunye neekhilomitha ezi-5 ukusuka kwidama leZegrze. Iibhayisekile ezi-2 ezikhoyo. Iindawo zokutyela ezikufutshane ngasechibini kunye nazo zonke izibonelelo ezibonelelwe yiRadzymin ekufutshane. Le cottage ibekwe kwindawo ezolileyo enemihlaba emikhulu. Abamelwane abalungileyo. Indawo elungileyo yezemidlalo. Iinkuni ezigqibeleleyo ze-MTB kunye nokubaleka. Kule ndawo kukho, phakathi kwezinye, Ii-Triathlons, iimarathoni. Ichweba libonelela ngazo zonke iintlobo zemidlalo yamanzi kunye nokuzonwabisa. Iasphalt ezilungileyo kunye neendlela zanamhlanje zebhayisekile ye-asphalt yokuhamba ngebhayisekile ezindleleni. Unokwenza iilophu ezintle ezijikeleze iindawo ezintle. Kwindawo enokubakho yokuzonwabisa kwamahashe.
Umbuki zindwendwe ngu- Paweł
Xa ndifika ndinibonise apha endlini ndininike nezitshixo. Ngokufanayo ekuhanjisweni.